Ministira muummee Itoophiyaa: Uummata Amboo fuldura itti dubbataniiru - BBC News Afaan Oromoo
Mummeen ministiraa Dr Abiy Ahimad dowwannaa isaanii jalqaba bara aangoo isaanitiin magaalaa Ambootti taasisaniin, jiraattoota magaalotaafi aanaalee godina Shawaa Lixaa kumaatamaan lakka'amaniif magaalaa Ambootti fuuldura haasaa taasisaniiru. Hawwaasnis simannaa ho'aa taasiseefira.
Magaalaa Amboo magaaloota godinaalee Oromiyaa mormii cimaan walitti fufiinsaan waggoota sadan darbaniif mootummaarratti itti gaggeeffamaa turan keessaa bakka dursaa eeramtuudha.
Dowwannaan ministirichaa jalqaba aangosaaniin durri magaalaa kanaaf dursi kennamufiinsaa hiikkaa guddaa akka qabu jiraattoonni ni dubbatu.
Sirna dowwannaa yaadannoo qabsaa'otaan eegalame kana irratti, qondaaltootni mootummaa, jaarsolii, abbootiin amantaa, baratootni fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa irratti hirmaataniiru.
Haasaa hirmaattotaaf taasisanin "ergama guddaa ummatoota Itoophiyaan nuuf keenname milkeessuuf kutannoo qabnu ibsuuf asitti argamne," jechuun muummichi ministiraa Abiy Ahimad himaniiru.
Ministirri Dr Abiyis gaaffiwwan dubartootaafi dargaggootaa hanga ammaa hin deebine hedduun akka jiraniifi furmaatawwan garaagaraa fudhachaa akka jiranis dubbataniiru.
"Hirmaannaa dargaggoofi dubartootaa malees nageenya amansiisaafi walitti fufiinsa qabu mirkaneessuun, ykn hojii misoomaafi dimookiraasii lafa qabsiisuun akka hin yaadamne ejjannoo cimaa qabna" jedhaniiru.
Kana malees, yeroon itti aanu kan tokkummaan uummata Oromoo caalmaatti cimee fakkeenya gaarii wal-ta'iinsa biyyaalessaa, saboota, sablammoota fi ummatoota biyyattii akka ta'uuf ummatni naannichaa akka gumaachufis waamicha taasisaniiru.
Jiraataa magaala Amboo Obbo Dhaabaa Cufaa dawwannaa ministira mummeetti gammaduusaanii dubbachuun haasaa mana maree bakka bu'oota fulduratti taasisan dhugoomsu akka qaban gaafataniiru.
Haa ta'u malee kana raawwachuuf ammoo yeroon kennamuufi qabas jedhaniiru.
Dr Abiy carraas qormaatas qabu kan jedhan jiraataan kun, carraan qaban uummatni sadarkaa amma irra gahe irraa duubatti kan hin deebiine ta'uusaa fi qormaatni immoo uummata kana qabatanii fulduratti deemuudha jedhaniiru.
Barattuu yunivarsiitii Amboo BBC'n haasofsiise Boontuu Dhaqqabaa, muummee ministiraa haaraa irraa wanta baay'ee akka eegdu himti.
Keessattuu dhimma nageenyaan walqabatee "gaaffii mirgaa uummanni gaafatuuf mootummaan rasaasaan osoo hintaane deebii seerri jedhu argachuu qaba. Kanas muummee ministiraa Dr Abiy Ahimad irraa eegna" jette.
"Qeerroon farra dimookiraasii osoo hin taanee dimokiraasii kan babal'isuudha,'' kan jedhu dargaggoo Adaana Abbabaa, mootummaan qeerroo akka al-Shabaabitti ykn al-Qaayidaatti ilaaluu osoo hin taane, dargaggoo mirga isaaf dubbatu akka ta'e hubatee gaaffii kaasuuf deebii quufsaa kennuu qaba" jedheera. Kanaafis wanta gurguddoo irraa eegna jedheera.
Buqqaattoonni naannoo Somaalee waa'ee daawwannaa Ministira Muummichaa maal jedhu laata?
Waa'een walitti bu'iinsa naannoole Oromiyaafi Somaalee kan badiinsa lubbuu fi qe'eerraa buqqa'iinsa kuma hedduu saaxileetiin hedduun gaddisiisuunsaa ni yaadatama. Ministirri mummichaa Dr Abiyi ammoo Sanbata tare Jigjjigaa dowwataniiru. Buqqaattoon Oromoo dowwannaa kanarratti yaada maal qabu laata?